इटहरीमा स्कुलबसकाे ठक्कर दिदा खातुन घाइते
इटहरी । कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरीको ईटहरी उप-महानगरपालिका-१२ खनार चौकमा स्कुल बसको ठक्करबाट १ जना पैदलयात्री घाइते भएकी छन् । बिहान साढे १० बजे ईटहरीबाट खनार तर्फ जाँदै गरेको को १ च.२२९२ नम्बरको हिमाली सेकेण्डरी बोर्डिङ स्
निराजन बस्तीमा स्कुटी नालिमा खस्दा एकको मृत्यु
धरान । धरान&ndash;१५ स्थित निराजन बस्ती जाने मार्गमा बिहीबार बिहान स्कुटी दुर्घटना हुँदा सोही ठाँउमा बस्ने २५ वर्षिय लक्ष्मण लामाको मृत्यु भएको छ ।को १६ प ९१०४ नं. स्कुटी अनियन्त्रीत भइ नालिमा खस्दा स्कुटी चालकको मृत्यु भएको इलाका
उर्लाबारीमा ट्याक्टर दुर्घटना एककाे मृत्यु
मोरङ । मोरङको उर्लावारी नगरपालिका-८ मेरी टोल भन्ने स्थानमा बुधवार ट्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना घाइते भएका छन् । दिउँसो करिब ३ बजे भित्री सडक खण्डमा आमबारीबाट दुर्गापुरी तर्फ आउँदै गरेक
दुर्घटनामा एकै परिवारका ६ जना घाइते
इनरुवा । सुनसरीको कोशी गाउँपालीकामा दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका ६ जना घाइते भएका छन् । सोमबार राति साढे ११ बजेको समयमा रोकिराखेको को १ त ६१२६ नम्बरको ट्याक्टर लाई पश्चिम बाट पूर्व तर्फ आउदै गरेको बा १ १७ च १४२ नम्बरको कारले ठक्क
मोटरसाईकल सिक्ने क्रममा दुर्घटना, विपि प्रतिष्ठानमा घाइतेकाे मृत्यु
धरान । धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका-८ मासिङटारमा बिहीवार मोटरसाईकल सिक्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । अपरान्ह ४ बजेको समयमा भित्री सडक खण्डमा को १५ प ३७६४ नम्बरको मोटरसाईकल सिक्ने क्रममा अनियन्त्रित भई सडकबाट
प्रकाशित मितिः माघ 26, 2075
फिकलमा जिप दुर्घटना ५ काे मृत्यु
सिन्धुली&ndash; सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिका&ndash;२ चण्डी भञ्याङमा जिप दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । फिकलबाट सिन्धुलीमाडी तर्फ जाँदै गरेको बा. १५ च ९४२२ नम्बरको बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको घटनास्थलमा र एकजनाको अस्पताल ल
धरान १८ राँगा चोकमा स्कुल बसको ठक्करबाट टेम्पोमा सवार ५ जना घाइते
सुनसरीको धरान उप-महानगरपालिका-१८ राँगा चोकमा स्कुल बसको ठक्करबाट टेम्पोमा सवार ५ जना घाइते भएका छन् । भानुचोकबाट घोपा क्याम्प तर्फ यात्रु बोकेर जाँदै गरेको को २ ह ५२२३ नम्बरको टेम्पोलाई बिपरित दिशाबाट आउँदै युरेको स्कुलको को �
इलाममा पिकअप दुर्घटनामा ५ घाइते
इलाम । ईलामको चुलाचुली गाउँपालिका-६ तोरीबारी भन्ने स्थानमा मंगलवार पिकअप दुर्घटना हुँदा चालक सहित ५ जना घाइते भएका छन् । दमकबाट पाँचथरको कन्याटार जाँदै गरेको मे १ ज १६२० नम्बरको पिकअप भ्यान उकालो चढ्ने क्रममा आज दिउँसो १ बजे अ�
हाइटेन्सनकाे तार सार्ने क्रममा लाग्याे ११ हजार भाेल्टकाे करेण्ट !
विराटनगर । विराटनगर बिजुलीको तार सार्ने क्रममा एक्कासी लाइन आएपछि करेण्ट लागेर तीन जना घाइते भएका छन् । कोशी राजमार्गको विराटनगर भृकुटी चोक खण्डमा बिजुलीको नयाँ पोलमा तार सार्ने क्रममा करेण्ट लागेर तीन जना घाइते भएका हुन् ।ज�
धरानकाे देउरालीमा माेटरसाइकलकाे ठक्करले एककाे मृत्यु
धरान । गए राती ९ः०० बजेकाे समयमा काे १९ प १२३० नं. काे माेटरसाइकलले ठक्धकर दिँदा धरान-५ देउराली बस्ने जितबहादुर लिम्बूकाे मृत्यु भएकाे छ । धरानबाट पानवारी तर्फ जाँदै गरेकाे माेटरसाइकलले देउरालीमा ठक्कर दिदा घाइते भएका लिम्बूल
सफारी दुर्घटना हुँदा एककाे मृत्यु
मोरङ / मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका &ndash;६ स्थित भित्री सडक खण्डमा मंगलबार दिउँसो सिटी सफारी दुर्घटना हुँदा २४ वर्षीय सूर्यनारायण पासवानको मृत्यु भएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको को १ ह ६८४६ नम्बरको सिटी सफारी आँफै अनियन्त�
आज पनि ट्रिपरको ठक्करबाट किशोरी घाइते
मोरङ । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-१४ जतुवामा ट्रिपरको ठक्करबाट साईकलमा सवार १ किशोरी घाइते भएकी छन् । बिहान साढे ११ बजे उत्तरबाट दक्षिण तर्फ आउँदै गरेको ना १ क ६२७१ नम्बरको ट्रिपरले सोही दिशा तर्फ आउँदै गरेको साईकलयात्री वि
टिपर सञ्चालनमा नगरपालिकाद्वारा रोक
बिराटचौक । मोरङको सुन्दरहरैचा ११ स्थित घिनाघाट मार्गमा सोमबार बिहान टिफरको ठक्करबाट ११ बर्षिया बालिका लक्ष्मी ढकालको मृत्यु भएपछि सो क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बनेको छ ।दुखद घटनाबाट सिर्जित अबस्थालाई मध्यनजर गरी सुन्दरहरैच�
बिराटचौकमा बच्चालाई किच्याएको भन्दै स्थानीयले तीनवटा ट्रिपरमा आगजनी
सुन्दहरैँचास्थित बिराटचौकमा एक बच्चालाई किच्याएको भन्दै स्थानीयले तीनवटा ट्रिपरमा आगजनी गरेका छन्। नाम थर खुल्न नसकेका एकजना बच्चालाई ट्रिपरले ठक्कर दिएपछि आक्रोहित स्थानीयले आगजनी गरेका हुन्। आगजनीपछि अहिले सो क्षेत्रम
सुंगुरलाई चारो पकाउने क्रममा जलेर घाइते
संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका-१ बयाँ बस्तीमा आगोले पोलेर १ महिला घाइते भएकी छन् । आगोले पोलेर सोही स्थान बस्ने बर्ष ६२ की गंगा कुमारी राई घाइते भएकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ । विहान ७ बजे सुंगुरलाई चारो पका
झापाको कन्काई नगरपालिका-८ घागरा खोलामा शनिवार बिहान ट्याक्टर दुर्घटनामा परि चालकको मृत्यु भएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा विहान ११ बजे पश्चिम तर्फ जाँदै गरेको मे १ त १४८९ नम्बरको ट्याक्टर आँफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको ह�
जन्तीकाे बसमा ११ हजार भाेल्टकाे करेन्ट लाग्दा ६ जनाकाे मृत्यु
धरान । धनुषाको सबैलामा जन्ती चढेको बसमा करेन्ट लाग्दा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डिएसपी दिपेन्द्र शाहीका अनुसार उदयपुरबाट धनुषा आउँदै गरेको ना ५ ख १७५२ नम्बरको बसमा ११ हजार भोल्टेजको तारले छोएको हो
धरानबाट बाङ्गे जाँदै गरेको ट्याक्टर पल्टिदा एकको मृत्यु
धरान । धरानबाट बाङ्गे तर्फ जाँदै गरेको ट्याक्टर पल्टिएर घाइते भएका युवकको मृत्यु भएको छ ।गत पुष २७ गते धरान&ndash;१७ स्थित पोक्लीन टापुमा को १ त ६७९२ नं. को ट्याक्टर खाल्डोमा परी ट्रलि पल्टिएको थियो । ट्रलि पल्टिदा घाइते भएका धरान १�
ग्याँस वाईल्डिङको ड्रम पड्किएर १ को मृत्यु
मोरङको बेलवारी नगरपालिका-११ मा ग्याँस वेल्डिङको ड्रम पड्किएर १ को मृत्यु भएको छ । बिहान ८:५० बजेको समयमा सोही स्थानमा रहेको बस्नेत ग्रिलमा काम गर्दै आईरहेका सोही स्थान बस्ने बर्ष ३७ को मनिष बराईलीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी का�